बुढी आमाका आशा - Enepalese.com
रमेश ढकाल २०७५ असोज २३ गते २३:१४ मा प्रकाशित
त्यतिनै खेर शुदेशको नजर, घर अगाडि रहेको सानो बगैचाको सीतल छहारीमा बसिरहेकी आमामा पर्छ। आमालाई देखे पश्चात शुदेश केहि सम्झे झै गरेर वापस रुम भित्र पस्छ र भन्छन् – रागिनी हामी शपिङ्का लागि गैरहेका छौ, तिमीले आमालाई सोधेउ, आमलाई पनि केहि चाहिएको थियो कि? रागिनीले भनिन्, छैन। खैर, यो उमेरमा आमालाई के नै पो चाहिन्छ होला’र! दुई छाक खान र दुईजोरी कपडा आमाका लागि काफी छ, यसमा आमालाई सोधिनै राख्नु पर्ने त्यस्तो के छ र?